China Drilling Tool Conical-Bottomed Bucket ho an'ny Deep Foundation Manufacturer and Exporter |FES
Fitaovana fandavahana siny miendrika boribory ho an'ny fototra lalina
Fampiharana:Ho an'ny indostrian'ny fandavahana fototra, indrindra indrindra amin'ny fandavahana vatokely, vatolampy mafy, fananganana vato mafy, sns.
-Drill miaraka amin'ny fanoherana kely sy fahombiazana ambony.
-Naorina-in tanjaka avo, dia mahavita tsara kokoa noho ny siny mahazatra rehefa fandavahana amin'ny gravel, vatolampy be latsa-dranomaso, fananganana vato mafy, sns.
-Boaty Kelly tsy voatery (130×130/150×150/200×200mm, sns.).
- Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny milina fandavahana rotary eny an-tsena, anisan'izany ny Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG, sy ny sisa.
-Manual na mandeha mandeha ho azy tsy voatery.
-Customization azo amin'ny fepetra manokana.
Ny siny ambany kesika dia fitaovana fandavahana vaovao, natao manokana miaraka amin'ny faritra fanapahana lehibe kokoa ary koa fisokafana midadasika kokoa sy nify maro kokoa, mety amin'ny fanekena ny tapa-kazo sy ny cobbles.
Ny horonan-tsarimihetsika momba ny fampiharana amin'ny tranokalan'ny siny Conical-Bottomed
Famaritana ny siny miendrika conical
Fitaovana fandavahana manokana hafa
Amin'ny maha-mpanome vahaolana tokana azy, izahay ao amin'ny FES dia afaka manolotra fitaovana fandavahana mahazatra avo lenta toy ny auger fandavahana rock, auger fandavahana tany, CFA, siny fandavahana vato, siny fandavahana tany, siny fanadiovana, barika fototra, sns.
Ny FES ihany koa dia afaka manome safidy maro kokoa amin'ny fanamboarana ireo fitaovana fandavahana manokana toy ny auger de displacement, hammer grab, lakolosy siny, cross-cutter, coring bucket, sy ny sisa.
Pd10 Pile Driver, Casagrande Drill Rig, Sany Drilling Rig, Fampidinana Drill Excavator Amidy, Auger Teeth, Hitachi Excavator Bucket Teeth,